News Collection: ब्याइफ्रेन्ड मिल्यो सुमिनालाई !
ब्याइफ्रेन्ड मिल्यो सुमिनालाई !
व्वाइफ्रेन्ड भेट्टाएको कुराले हिरोइन सुमिना घिमिरेका केटा फ्यानहरुलाई पक्कै निराश तुल्याउन सक्छ । लामो समयदेखि काटिएको अड्कललाई 'जय होस' नायिकाले अन्ततः सत्य सावित गरिदिइन् ।
मेरोसिनेमा डटकमका लागि फोटोसुट गर्ने क्रममा सुमिनाले आफ्नो व्वाइफ्रेन्ड भएको तर लाइफफ्रेन्ड नभएको बताइदिइन् । कुरा सुन्दा लामो समयदेखि ब्वाइफ्रेन्डसँग यी चुलबुले बालाले डेट् गरिरहेकी छिन् । यद्यपी प्रेमका बारे अनाडी रहेको बताउँछिन् उनी ।
सुर्खेतकी यी ठिटीले कसलाई ब्वाइफ्रेन्ड बनाइन् यो भने उनको ब्यागभित्र नै हुनुपर्छ । 'प्रेमका बारेमा अहिलेको जेनेरेसनलाई सिकाइरहनुपर्छ र' हामीसँग छिल्लिइन उनी 'आमाकै गर्भबाट को सिकेर आउँछ र ?' कलेज लाइफमा थुप्रै दिवानाले प्रेमप्रस्ताव नराखेका पनि होइनन् तर कलकलाउँदी सुमिनाले कुनै दिवानालाई हरियो झन्डा देखाइदिनन् मात्र एकजनालाई बाहेक ।
मेरोसिनेमासँग फोटोसुटमा उनले अनेक पोजहरु दिइन् । उनको ग्ल्यामर र बोल्ड तस्विरहरु साप्ताहिकको शुक्रबारे संस्करणमा पनि प्रकाशित भएका छन् । 'छविलाल कन्जुस छैन'की डेब्युगर्ल सुमिना यतिबेला 'दुलही' र 'फर्किआऊ' प्रोजेक्टमा व्यस्त छिन् ।